नागबेली जुँगा पालेर मासिक अढाई सय तलब ! – Satyapati
नागबेली जुँगा पालेर मासिक अढाई सय तलब !
दाङ । रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका–६, रुकुमकोट घर भएका कालीबहादुर बुढाथोकी वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक घोराही दाङमा सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत रहेका छन् । बैंकमा सुरक्षा दिनु उनको दैनिकी हो । सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत बुढाथोकीले बैंकको नियमानुसार तलब बुझ्दै आएका छन् ।
हाल घोराही उपमहानगरपालिकामा बस्दै आएका उनले जुद्ध एण्ड पूर्ण निर्माण सेवाबाट मासिक २५० रुपैयाँ तलब खाँदै आएका छन् । तर उनले त्यहाँ भने कुनै डिउटी गर्नुपर्दैन । बुढाथोकीलाई जुद्ध एण्ड पूर्ण निर्माण सेवाका सञ्चालक पूर्ण भण्डारीले मासिक २५० रुपैयाँ तलब दिँदै आएका छन् ।
बुढाथोकीलाई जुद्ध एण्ड पूर्ण निर्माण सेवाका सञ्चालक भण्डारी कामै नगरी मासिक २५० रुपैयाँ तलब किन दिन्छन् ? कारण फरक रहेछ । बुढाथोकीले जुद्ध एण्ड पूर्ण निर्माण सेवाका सञ्चालक भण्डारीबाट आफुले जुँगा पालेकै कारण मासिक २५० रुपैयाँ तलबबापत बुझ्दै आएका छन् ।
बुढाथोकीले जुँगा पालेर १२ वर्षदेखि मासिक तलब बुझ्दै आएका छन् । ‘म पेशाले निर्माण व्यवसायी हुँ, कामको सिलसिलमा बैंकमा आइरहँदा कालीबहादुरले पालेको जुंगा देख्दा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो,’ भण्डारीले भने, ‘नागबेली आकारको उनको काला जुँगा देखेपछि मैले खुशीले उहाँलाई पोत्साहन स्वरुप पैसा दिने निर्णय गरेको हुँ ।’
२०६२ सालदेखि आफूले नियमित रुपमा जुँगा पालेबापत रकम प्राप्त गर्दै आएको बुढाथोकीले बताए । ५० रुपैयाँबाट मलाई पैसा दिन सुरु गर्नुभएको हो,’, बुढाथोकीले भने, ‘अहिले २५० रुपैयाँ मासिक तलब उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ ।’ बुढाथोकी रिटायर नेपाली सेना हुन् ।
उनले नेपाली सेनाको दुर्गा भञ्जन गुल्ममा कार्यरत रहँदा २०५७ सालतिर पनि मासिक एक सय रुपैयाँ जुँगाको तबल खाने गरेका थिए । अहिले बैङको सुरक्षा गार्डका रुपमा रहेका बुढाथोकीलाई निर्माण व्यवसायी भण्डारीले आफू बाँच्दासम्म हरेक वर्ष थोरै भए पनि वृद्धि गर्दै जुँगाको लागि पैसा दिइरहने बताए । भण्डारीले बुधबार बुढाथोकीलाई बैङ्कमा भेटर ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए ।